DEG-DEG: Luis Suarez Oo Dhaawacmay & Atletico Madrid Oo Warkii Ugu Xumaa Heshay Kahor Dagaalka Ay La Liga U Galayso - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Luis Suarez Oo Dhaawacmay & Atletico Madrid Oo Warkii Ugu Xumaa Heshay Kahor Dagaalka Ay La Liga U Galayso
DEG-DEG: Luis Suarez Oo Dhaawacmay & Atletico Madrid Oo Warkii Ugu Xumaa Heshay Kahor Dagaalka Ay La Liga U Galayso
April 7, 2021 Saed Mohamed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka La Liga 0
Kooxda Atletico Madrid ayaa heshay warkii ugu xumaa ee ugu macquulsanaa ee ay ka heli karaysay xiddig kooxdeeda ah kaddib markii ay xaqiijisay dhaawaca weeraryahanka kooxdeeda ee Luis Suarez.
Atletico Madrid ayaa hadda ah kooxda wali majaraha u haysa horyaalka La Liga iyaga oo 1 dhibic ka sarreeya Barcelona halka ay saddex dhibcood ka sarreeyaan Real Madrid taas oo muujinaysa adayga xilliga uu kusoo beegmay dhaawaca El Pistolero.
Suarez ayaa ahaa xiddiga ugu muhiimsan Rojiblancos xilli ciyaareedkan isaga oo kulamo badan sabab u ahaa inay saddexda dhibcood kasoo heleen.
Kahor warbixinta rasmiga ah ee ay soo saartay Atletico Madrid, wargeyska Cadena Cope oo warbixin ka qoray dhaawaca gaadhay Suarez ayaa sheegay inuu dhaliyaha ree Uruguay ka baxay tababarka kooxda ee maanta.
Atletico Madrid ayaa shaacisay in nooca dhaawaca gaadhay Suarez uu yahay mid ka gaadhay muruqa lugta bidix isla markaana wali la wado qiimaynta heerka dhaawaca iyo mudada uu garoomada ka maqnaan karo.
Suarez ayaa ilaa haatan xilli ciyaareedkan 19 gool oo kulamada La Liga ah usoo dhaliyay Atleti walow uu kaliya hal gool soo dhaliyay afartii ciyaarood ee ugu dambeeyay isla markaana uu kaliya 3 gool kusoo diiwaan gashadat 11 kii ciyaarood ee ugu dambeeyay.
Marka horeba Suarez ayaa ganaax ku seegayay ciyaarta toddobaadka soo socda ee Atletico ay la leedahay Real Betis, kooxda caasimada Spain ayuu wer-wer kale ku hayaa Moussa Dembele oo isaguna ka maqan.